နညျးပညာ – သုတရသ
Nov 18, 2021 Shwe Myanmar
Zawgyi မိုးကြီးလေကြီးမှာ ဖုန်းပြောနေရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ အမေး – လျှပ်စီးတွေ လက်နေတဲ့အခါ ပြောနေတဲ့ ဖုန်းထဲကို လေထဲကနေ တစ်ဆင့် လျှပ်စီး မဝင်လာနိုင်ဘူးလား ? အဖြေ – မဝင်နိုင်ပါဘူး ။ လေ…
နညျး ပ ညာ ခေ တျ မှာ က လေး တှေ မြ ကျ လုံး မ ထိ ခို ကျ အောငျ ဘ ယျ လို ကာ ကှ ယျ ကွ မ လဲ
Nov 17, 2021 Shwe Myanmar
Zawgyi နည်းပညာခေတ်မှာ ကလေးတွေ မျက်လုံးမထိခိုက်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ ဒီနေ့ခေတ်အခါမှာ ကလေးတွေနဲ့ နည်းပညာကို ခွဲခြားလို့ မရပါဘူး။ ပညာရေးအတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အပျော်လဲ ဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို ကြည့်တဲ့ အချိန်က တစ်နေ့တာမှာ နာရီများစွာ…
Zawgyi မီတာခ ပုံမှန်ထက် ပိုမကျအောင် ရှောင်သင့်သည့် အချက် ( ၂၄ ) ချက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို သုံးစွဲရာတွင် စနစ်တကျ အသုံးမပြုခြင်း၊ မလိုအပ်ပဲ ပိုသုံးထားခြင်း စသည့်အချက်များက သင့်အိမ်ရဲ့ မီတာခကို ပုံမှန်ထက်…
ဖုနျး အ ဟော ငျးတှေ ပွနျဝယျသုံးမယျ ဆိုရငျ ဒီအခကျြတှေ မဖွဈမနေ စဈပါ..
Zawgyi တစ်နေ့ထ က်တစ်နေ့ ဖုန်းအမျိုးအ စားအသ စ်တွေ တစ်မျိုး ပြီးတစ်မျိုး ထွက်လာ သလိုပဲ တစ် ပတ်ရစ် ဖုန်းဈေးကွ က်ကလည်း တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ပြန့်လျက်ရှိပါတယ်။ အသစ်စက် စက်ဖုန်း တစ်လုံး မဝယ်နိုင်လို့…
“အိမျကို ကှ နျ က ရ ဈ နဲ့ ဆော ကျ ရ ငျ ကော ငျး မ လား သံ နဲ့ ဆော ကျ ရ ငျ ကော ငျး မ လား ဆို သူ မြား အ တှ ကျ အား သာ ခြ ကျ/ အား န ညျး ခြ ကျ”
Oct 6, 2021 Shwe Myanmar
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ အိမ်ကို ကွန်ကရစ် နဲ့ ဆောက်ရင်ကောင်းမလားး သံနဲ့ဆောက်ရင် ကောင်းမလား ခဏ ခဏ မေးခံရတဲ့ မေးခွန်းပါ ။ သူတို့ရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကတော့ အသီးသီးရှိပါတယ်။ သေချာဖတ်ပြီး ရွေးချယ်ပေါ့ ။…
“အငျတာနကျ အဖွတျမခံရသေးခငျ ကိုယျက ဦးအောငျ ကွိုတငျပွငျဆငျထားရမယျ့ နညျးလမျး…”
Aug 29, 2021 Shwe Myanmar
Zawgyi (အရေးကြီးနေပါပြီ) ကိုယ်ဖတ်ရင် ကိုယ်ပဲသိမယ်…. ကိုယ်ရှယ်ရင် အားလုံးသိမယ်…. အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။ အင်တာနက်အတွက် ပြင်ဆင်ရန်….. အင်တာနက် ထိန်းချုပ်ခံရလျှင် ပထမဦးစွာ Shutdown ခံရ ပါလိမ့်မယ်။ ( အနီရောင် အဆင့် Nug…
“WiFi လိုငျးကို နှောငျ့နှေးစတေဲ့ အိမျသုံးပစ်စညျး (၈) မြိုး”
Aug 24, 2021 Shwe Myanmar
Zawgyi အင်တာနက်လိုင်း ကောင်းတဲ့အခါ ပျော်တဲ့ အပျော်က တခြားအပျော်တွေနဲ့ မတူပါဘူး။ အင်တာနက်လိုင်း မကောင်းရင်လည်း တော်တော် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ပါတယ်။ WiFi လိုင်း မကောင်းတာက တစ်ခါတလေ operator နဲ့ သက်ဆိုင်သလို တစ်ခါတလေ…
“အငျတာနကျ မသုံးဘဲငှဖွေတျခံနရေပါသလား မဖွဈအောငျ ဒါတှလေုပျပါ”
Aug 18, 2021 Shwe Myanmar
Zawgyi အင်တာနက် မသုံးဘဲငွေဖြတ်ခံနေရပါသလား မဖြစ်အောင် ဒါတွေလုပ်ပါ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြု သူတွေ အင်တာနက် ဘယ်လိုသုံးလိုက်တယ်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု နှုန်းထားကို တိကျစွာ သိရှိဖို့အပြင် အင်တာနက် သုံးစွဲချိန်တိုင်းမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု ပမာဏများအတွင်းမှ ဒေတာများ လျော့နည်းသွားခြင်း…
“Wifi ကိုတီထှငျခဲ့သူ ခြောမောလှပတဲ့ ဟောလိဝုဒျမငျးသမီး…”
Aug 10, 2021 Shwe Myanmar
Zawgyi Wifi ကိုတီထွင်ခဲ့သူ ချောမောလှပတဲ့ ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး… Hedy Lamarr လို့ခေါ်တဲ့ အသက် (၃၀) အရွယ်ရှိ အမျိူးသမီးတစ်ဦးဟာ ရုပ်ရှင်ပေါင်းမြောက်မြားစွာမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ အော်စကာဆု အတွက်လည်း ဆန်ခါတင်စာရင်းတွေ ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Hedy Lamarr…
“မလိုအပျရငျ Facebook Log Out လုပျတာမြိူး ခုခြိနျမလုပျပါနဲ့ ”
Zawgyi မလိုအပ်ရင် Facebook Log Out လုပ်တာမျိူး ခုချိန်မလုပ်ပါနဲ့ ဒီမနက် Facebook Log out လုပ်မိတဲ့ Account တွေLog in ပြန်ဝင်တဲ့အခါ Temporarily Blocked ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။ Vpn…